“Waxaa wada hadlaya Soomaali, ma ahan in Ajnabi loo yeero sidii labo dal oo kale” Khalid Cumar Cali – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
“Waxaa wada hadlaya Soomaali, ma ahan in Ajnabi loo yeero sidii labo dal oo kale” Khalid Cumar Cali
19th March 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibada Soomaaliya Khaalid Cumar Cali ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray Maamulka Somaliland ee ahaa in aanay marnaba la fariisan doonin Soomaaliya ilaa ay Beesha Caalamka goob joog ka noqoto wada hadalada labada dhinac.
Dr. Khaalid Cumar Cali ayaa sheegay in hadalkaas uu yahay mid nasiib daro ah, isla markaana waxa wada hadlaya ay yihiin dad Soomaaliyeed, sidaas darteedna aanay habooneyn in ajnabi kale loogu yeero inay dhex dhexaadiyaan.
“Waa maqlay hadlka Biixi, arrimo badan oo deel-qaaf ku jiro ayuu ka hadlay, wada hadalada muddo dheer ayuu soo socday dowladda Ingiriiska ayaa garwadeen ka aheyd oo fududeyneysay tasiilaadka iyo goobta lagu kulmi lahaa iyo isu keeni taanka labada dhinac”ayuu yiri Dr.Khaalid Cumar Cali oo wareysi siiyay Idaacada VOA.
Mar la weydiiyay in wixii hada ka dambeeya wada hadalada labada dhinac inay Beesha Caalamka goob joog ka noqoneyso ayuu ku jawaabay in arrintaas aanay sax aheyn oo sida labo dowladood oo kale loo dhex dhexaadineyn.
“Arrimaha waxay ka dhaxeeyaan Soomaali, dadka wadahadlaya waa dad Soomaaliyeed, ma ahan labo dal oo kala duwan, sida Eritrea iyo Itoobiya, anagoo ilaalineyna Midnimada Soomaaliya, waxa ay wax ka dhaxeeyaan waa Soomaali, ayagaana xalisanaya”ayuu yiri Khaalid Cumar Cali.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in xilligii xoriyadda kadib la saxiixay heshiis midnimada iyo wada jirka Soomaaliya ah, heshiiskaas uu taagnaa, balse Somaliland ay iskeed u gaartay go’aan ah inay gaar u istaagto, laakiin aanay aheyn go’aan shacabka Soomaaliyeed ay cod ugu qaadeen ama si guud la isku afgartay sida uu yiri.
Ugu dambeyn Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibada Soomaaliya Khaalid Cumar Cali ayaa sheegay in diyaar u yihiin wali in wada hadalada labada dhinac ay sii socdaan
Gudoomiy ku xigeenka Siyaasadda iyo Amaanka gobolka Banaadir oo la magacaabay